Mareykanka oo qorshe cusub u dejiyay xiyaraadda Siyaasiyiinta | KEYDMEDIA ENGLISH
Mareykanka oo qorshe cusub u dejiyay xiyaraadda Siyaasiyiinta
Xukuumadda Washington, ayaa ka shaqeyneysa, sidii ay u ballaarin lahayd saameynta cunaqabateynta socdaal ee dhawaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkaas, ku soo rogtay shaqsiyaad Soomaali ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hor leh, ayaa ka soo baxay, xayiraadda fiisaha ee Dowladda Mareykanku saartay shaqsiyaadka caqabadda ku ah doorashooyinka Soomaaliya, kuwaas oo xitaa qoysaskooda ay saameyn taban ku yeelan doonto cunaqabateyntu, haddii ay si buuxda u hirgasho.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa dhaawaan shaaca ka qaadday, in Mareykanku uu xayiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogay shaqsiyaad Soomaali ah, oo la rumeysan yahay in ay ku jiraan kuwa hadda madax ah iyo kuwa hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalkaan xasaraduhu la degeen.
Xogta cusub, ee soo gaartay “warqabadka Keydmedia Online”, ayaa sheegeysa in Dowladda Mareykanku, waddo dadaallo ay ku ballaarineyso saameynta xiyiraadda socdaalka ee la saaray xubnaha aan wali si cad loo baahin magacyadooda, kuwaasoo lagu eedeeyay, in ay muddo hor taagnaayen doorashooyinka.
Sida ay KON, ka soo xiganayso, ilo loo qaateen ah, Mareykanka, ayaa dalalka xulufada la ah, oo ay ugu horreeyaan, Djibouti, Ethiopia, Italy, Norway, Kenya, Qatar, Sweden, Turkey, UAE, Uganda, iyo UK, ka dhaadhicinaya hirgalinta, cunaqabatenyta cusub, taas oo caqabad xooggan ku noqon doonta dadka ay saameyso.
Ku dhawaad 50 ruux oo Madax, Siyaasiyiin, Saraakiil, iyo Qoysaskooda, ayaa ku qoran liiska shaqsiyaadka la cunaqabateeyay, kadib markii lagu fashilmay in geeddi-soodka doorashooyinka la soo gabagabeeyo 25 Febaraayo, isla-markaana dib loo dhigay ilaa 15 bisha March, taas oo ka careysiiyay Washington.
Maamuka Joe Biden, ayaa hore marar badan walaac ka muujiyay dib u dhacyada, habraaca doorashada, iyo saameynta ballaaran ee ay khaladaadkaas ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasilloonida dalka, wuxuuna xusay in kaliya waddada xalku ku jiro tahay gabagabeynta doorasho lagu kalsoonaan karo.